अब दुई घण्टामा पिसिआरको नतिजा, शुल्क कति लाग्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अब दुई घण्टामा पिसिआरको नतिजा, शुल्क कति लाग्छ ?
अशोज ४ गते, २०७७ - १३:४३
कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिशचन्द्र न्यौपानेले रु चार करोडभन्दा बढी खर्च गरेर प्रयोगशाला स्थापना गरिएको जानकारी दिए। नेपालमा नै निजी क्षेत्रबाट कोरोना रोगको परीक्षण र उपचारमा आफ्नो मेडिकल कलेजको भूमिका नेतृत्वदायी भएको उनको भनाइ छ । सरकारको निजी क्षेत्र प्रतिको धारणा सकारात्मक हुन सकेमा रोग नियन्त्रण र उपचारमा निजी क्षेत्रले थप योगदान गर्न सक्ने उहाँले जानकारी दिए ।
अशोज ४ गते, २०७७ - १३:४३ मा प्रकाशित